राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर केपी ओली र झलनाथ खनालबीच बैठकमै हात हालाहालको अवस्था ! — Sanchar Kendra
राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर केपी ओली र झलनाथ खनालबीच बैठकमै हात हालाहालको अवस्था !
राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर एमालेभित्र विवाद चर्किन थालेको छ । मंगलबार एमाले स्थायी कमिटि बैठकमा ओलीले विद्या भण्डारीलाई फेरि राष्ट्रपतिमा उठाउने प्रस्ताव गरेपछि विवाद देखा परेको हो ।
ओलीले बिद्या भण्डारीलाई नै पुनः राष्ट्रपति बनाउने कुरा बारम्बार उठाएपछि खनाल आक्रोशित बनेका छन् । केहिदिन अघि पनि खनालले आफु राष्ट्रपति बन्नका लागि कसैसँग हात नाजोड्ने बताएका थिए ।
‘राष्ट्रपति दोहोर्याउने विषयलाई लिएर उहाँहरुबीच केहीसमय विवाद भयो,’स्रोतले भन्यो, ‘अन्य साथीहरुले पनि सहमतिका आधारमा चयन गर्ने कुरामा विवाद नझिकौं भनेपछि साम्य भयो ।’ खनाल र अाेलिबीचकाे बिवाद हात हालाहालसम्मकाे अवस्थामा पुगेपछि अन्य नेताहरूले साम्य पारेका थिए ।
तर ओलीको उक्त प्रस्तावबारे अर्का बरिष्ठ नेता एवम पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भने मौन देखिएका थिए । ओलीले यसअघि नै कम्तिमा राष्ट्रपतिले पाँच वर्ष चलाउन पाउनुपर्ने आफूहरुको मान्यता भएकोले अहिलेको राष्ट्रपति भण्डारीलाई दोहोर्याउने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
भण्डारीलाई राष्ट्रपति दोहार्याउन नहुने भन्दै खनाल एमालेभित्र एक्ला देखिएका छन् । यता भण्डारीले आफूलाई नै दोहोर्याउन अ‍ोली र प्रचण्डलाई दबाब दिँदै आएकी छन् । ओलीेले भण्डारीको पक्ष लिएका छन् । उनले यसअघि नै भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन आश्वाशन दिई सकेको स्रोतको दाबी छ ।